the last artscape of than myint aung | PanSuriya Art Post
I am always glad to see real art instead of smarty alik art. or the bad art I see so too often is just because some can.t paint well enough, yet or are onlyalittle talented. Out here in Egypt they sell bad art as they do not know what real art is. The public out ere are daft or not intelligence as to what to spend their money on.
Your art is true and real and beautiful !1 Thank you !!
Comment by Amina Carrol Kishk 1 August 2011 @ 18:03
We found that much of the Burmese art available for purchase was either copies of really good paintings, or really schlocky paintings from painters who had good technique, but no ideas. We knew lots of artists and illustrators who had plenty of intelligence and did not turn it off when they painted, and opened Pansodan Gallery to show them. But the interesting thing that I found when I talked to the artists about their lives is that many of them painted rather bad paintings in their first years of painting. It took themawhile to get beyond crafting rather dull or imitative paintings, to realise that they should be putting their own impressions and ideas into paint.
I am glad that you appreciate the revolution in their thoughts and their true talents. Much of the public does, crazily, buy imitations and boring pictures, but fortunately there are enough people like you who are looking forafresh angle, an individual vision, that these artists are able to live creating real and beautiful images.
Comment by pansuriya5August 2011 @ 16:02
ပန်းချီဆရာတွေထဲမှာ ဦးငွေကုိုင်၊ ဦးလွန်းကြွယ်၊ ဦးလူတင်၊ ကုိုမင်းဝေအောင် စတဲ့ ပန်းချီဆရာကြီးတွေကုို ကြိုက်တယ်။ ဘာကြောင့် ကြိုက်သလဲဆုိုတော့ သမုိုင်းကြောင်းအရ အနုပညာအရ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတွေ၊ စဉ်းစားစရာတွေကုို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားပြီး ကုိုယ့်စတုိုင်ကုို ကုိုယ်ထွင်ထားလုို့ ဖြစ်တယ်။ အခုနောက်ပုိုင်းပန်းချီဆရာတွေက ဓါတ်ပုံတွေ ရုိုက်ဆွဲတယ်။ ဆရာပေါ်နာမည်ကြီးတော့ ဆရာပေါ်ရဲ့ စတုိုင်တွေကုိုလည်း ကူးကြတာ ပလူပျံနေတယ်။ ကောင်းတာကတော့ ကုိုယ့်စတုိုင်ကုို ကုိုယ်ထွင်ဘုို့ပါပဲ။ ဒါမှလည်းမြန်မာပန်းချီလောက တုိုးတက်လာမှာပါ။ နောက်ပုိုင်း လက်သစ်တွေထဲမှာလည်း အတွေးအခေါ် ထည့်ဆွဲလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအထဲ ဆရာ ဦးမြသောင်း နဲ့ ကုိုမုတ်သုံတုို့ကုို ကြိုက်ပါတယ်။ ဆရာ မြသောင်းလည်း ဆက်မှ ဆွဲသေးရဲ့လား မသိ။
Comment by T4November 2011 @ 14:13
In Unicode: ပနျးခြီဆရာတှထေဲမှာ ဦးငှကေိုငျ၊ ဦးလှနျးကွှယျ၊ ဦးလူတငျ၊ ကိုမငျးဝအေောငျ စတဲ့ ပနျးခြီ​ဆရာကွီးတှကေို ကွိုကျတယျ။ ဘာကွောငျ့ ကွိုကျသလဲ​ဆိုတော့ သမိုငျး​ကွောငျးအရ အနုပညာ​အရ အရေးပါတဲ့ ကိစ်စတှေ၊ စဉျးစားစရာတှကေို ထညျ့သှငျး​ရေးဆှဲထားပွီး ကုိုယျ့စတိုငျကို ကိုယျထှငျ​ထားလို့ ဖွဈတယျ။ အခု​နောကျပိုငျး​ပနျးခြီဆရာတှကေ ဓါတျပုံတှေ ရိုကျဆှဲတယျ။ ဆရာပျေါ​နာမညျကွီးတော့ ဆရာပျေါရဲ့ စတိုငျတှကေိုလညျး ကူးကွတာ ပလူပြံနတေယျ။ ကောငျးတာကတော့ ကိုယျ့စတိုငျကို ကိုယျထှငျဘို့ပါပဲ။ ဒါမှလညျးမွနျမာပနျးခြီ​လောက တိုးတကျ​လာမှာပါ။ နောကျပိုငျး လကျသဈတှေ​ထဲမှာလညျး အတှေးအချေါ ထညျ့ဆှဲ​လာတာ တှရေ့ပါတယျ။ အဲဒီအထဲ ဆရာ​ဦးမွသောငျးနဲ့ ကိုမုတျသုံတို့ကို ကွိုကျပါတယျ။ ဆရာ မွသောငျးလညျး ဆကျမှ ဆှဲသေး​ရဲ့လား မသိ။
Comment by pansuriya5November 2011 @ 02:32